धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताको धर्ना
काठमाडौं, चैत १० । सेयर बजार विकास र बिस्तारका लागि भन्दै आन्दोलनको घोषण गरेको लगानीकर्ताहरुको एउटा समूहले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । सेयर लगानीकर्ता दबाव समूहको टोली जावालाखेलस्थित बोर्डको कार्यालयमा बिहानै ताला लगाएर धर्नामा बसेको हो ।
लगानीकर्ताहरुले मूख्य ढोकामा ताला लगाएर ढोकाकै अगाडि धर्नामा बसेपछि बोर्डका कर्मचारीहरु भने कार्यालयमा पस्न पाएका छैनन् । ताला लगाएर ढोकामै धर्ना सुरु भए पछि बोर्डको दैनिक कामकारबाही समेत ठप्प भएको छ ।
बोर्डका एक जना कर्मचारी कार्यालयभित्रै थुनिएका छन् । बाँकी कुनै पनि कर्मचारीहरु कार्यालय प्रवेश गरेका छैनन् । यसले बोर्डबाट हुने दैनिक कामकारबाही पूर्ण रुपमा प्रभावित भए पनि बोर्डका अधिकारीहरु भने समस्या समाधानमा अग्रसर देखिएका छैनन् ।
धर्नामा सहभागी लगानीकर्ताहरुका अनुसार बोर्डका अधिकारीहरुले अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक समस्या समाधान गर्न वार्तामा बस्न प्रस्ताव गरेका छैनन् ।
यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज घेराउ हुँदै आमरण अनसनसम्म बसेको लगानीकर्ताहरुको उक्त समूहले आफ्नो पुरानै मागहरु अघि सार्दै गत फागुन २८ गते आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको थियो ।
समूहले आफ्नो मुख्य मागको रुपमा अर्थमन्त्रीको बर्खास्ती रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पुँजी बजार विरोधी भएको र उनको बर्खास्ती नभएसम्म सेयर बजारमा सुधार हुन नसक्ने भएकाले बर्खास्तीको माग अघि सारेको समूहले बताउँदै आएको छ ।
यसअघि पनि अथमन्त्री खतिवडाका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा। रेवतबहादुर कार्कीलगायतको राजीनामा समूहले माग गर्दै आमरण अनसन बसेको थियो ।
आफ्ना माग पूरा नभइ आमरण अनसन तोड्न बाध्य भएको समूहले त्यसबेला आफ्नो आंशिक मागहरु पूरा भएको दाबी गर्दै आएको छ । यसपटक भने समूहले गभर्नर, बोर्डका अध्यक्षलगायतको राजीनामा मागलाई भने अघि सारेको छैन ।
लगानीकर्ताहरुले ताला लगाएर बोर्डमा धर्ना बसेपछि कार्यालयका कर्मचारीहरु भने कार्यालय अघि घाम तापेर बसेका छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौड्यालसहितका कर्मचारीहरु कार्यालय अघिको चौउरमा बसेर घाम तापिरहेका छन् । पौड्यालसहित करिब ३ दर्जन कर्मचारीहरु बाहिर घाम तापेर आनन्द लिइरहेको बोर्डकै एक कर्मचारीले बताएका छन ।